अघोर बाबा लाईफ ड्यामेज भन्दै खनिए धनी र महगो गाडी चढने सँग!!भन्छन सबैले भातै खाने हो (भिडियो) « Np Online TV
अघोर बाबा लाईफ ड्यामेज भन्दै खनिए धनी र महगो गाडी चढने सँग!!भन्छन सबैले भातै खाने हो (भिडियो)
करिव केहि महिना देखि अघोर बाबानेपालमा युटुवमा धेरै छाएका छन् । उनिसंग अन्तर्वार्ता लिन युटुबरहरुको घुइचो नै लाग्ने गर्छ । नेपालमा अहिलेका चर्चित च्यानलहरुमा पनि उनको अन्तर्वार्ता हेर्न सकिन्छ । बिगत ३० वर्ष देखि अघोरीबाबा बनेका बाबासंग बाल्यकालको बारेमा कुराकानी गरिएको छ । उनि बाल्यकालमा हुँदा गीतसंगीतमा लागेको कुरा पनि खुलाएका छन् ।
काठमाडौँमा जन्मिए पनि उनि ५ वर्ष देखि अनाथ भएका थिए । त्यसपछि उनि आश्रमको साहारामा पुगेका थिए । त्यसपछि उनि बाजेको साहारामा भारत पुगेका थिए । उनि भारत गएर अघोरीबाबाको शरणमा पुगे । त्यसपछि सुरु भयो उनको अर्को जीवन । आज उनि ६१ वर्ष पुगी सके तर २० वर्षको हुदा देखि सिकेको अघोरबाबाको ध्यान अझै दिन रात जब्छन । एकान्तमा ध्यान गर्ने बाबाले अर्को अनौठो प्रतिभा देखाएका छन । भिडियो हेर्नुहोस: